Ahoana no insulation trano amin`ny hatsiaka amin`ny ririnina? | Green Renewable
pochoky | | Toekarena an-trano
Isaky ny manakaiky ny vanim-potoana ririnina dia tonga ny fotoana mangatsiaka sy ambany. Zavatra midika fiovana eo amin'ny fomba fanao ny olona na ao anatiny na ivelan'ny trano. Niala tany amin'ny terrace izahay ka nijery sarimihetsika teo ambony sofa. Ary eto indrindra ny kitapo misy ny fanontaniana, satria misy fotoana tsy ahazoantsika maripana sahaza mba hampafana ny trano. Noho izany antony izany, dia hanome anao toro-hevitra tsy maintsy raisinao ianao mba hitazonana ny tranonao tsy ho mangatsiaka amin'izao fotoana izao.
Ny zavatra voalohany tonga ao an-tsaina dia ny fitaovana izay nanorenana ny trano. Noho izany, ny insulation ny valin-drihana sy ny rindrina amin'ny fitaovana isan-karazany toy ny bosoa, landihazo recycled, spray foam ary na fiberglass aza dia manana lanjany manokana.
Hevi-dehibe iray hafa dia ny varavarankely. Mba hisorohana ny hatsiaka tsy hiditra amin'izy ireo, dia ilaina ny kalitao avo lenta ny varavarankely. Raha tsy izany dia tsy maintsy ampiasaina ny fitaovana sasany. Ohatra, asio silicone manodidina ny rindrin'ny varavarankely mba hisorohana ny fidiran'ny hatsiaka na asio foam eo anelanelan'ny varavarankely sy ny rindrin'ny trano mba hamehezana ny triatra.
Tsy maintsy saronanao amin'ny kasety insulation koa ny slot izay ananan'ny baosin'ny jamba satria raha tsy izany dia hiditra toy ny tsy misy rahampitso ny rivotra.
Ny lafin-javatra hafa izay tafiditra ao amin'ny insulation trano dia:
karazana trano: rihana voalohany, penthouse, duplex na chalet
haben'ny trano, izany hoe ny metatra toradroa izay ananany
toerana trano, izany hoe raha eo amin’ny zoron’ilay trano izy io na raha misy trano mifanila aminy
Ny fanaka, ny tsihy ary ny ridao koa dia manampy amin'ny fanamainana ny trano. Mazava fa raha vaovao ny trano ary tsy mbola mitafy karazana haingon-trano toy izany, dia hihena ny mari-pana. Na dia hiankina amin'ny karazana fanafanana ao an-trano aza izany, zavatra izay mampanahy antsika be dia be raha toa ka afaka manao izany isika. mitsitsy amin'ny faktiora amin'ny faran'ny volana. Ary tsy mitovy izany raha rafitra fanamafisam-peo afovoany izay hanaovana ny fifantohan'ny hafanana amin'ny ora izay iadiana azy. Na izany aza, raha ny rafitra dia manokana isan-tokantrano, ny fianakaviana tsirairay no hifidy ny mari-pana tsara indrindra ho an'ny tranony sy ny fe-potoana tsara indrindra hanonerana azy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Toekarena an-trano » Ahoana no insulation trano amin`ny hatsiaka amin`ny ririnina?